२० हजार प्रवासी मजदूरलाई घर दिँदै अभिनेता सोनु….! – Khabar PatrikaNp
२० हजार प्रवासी मजदूरलाई घर दिँदै अभिनेता सोनु….!
August 25, 2020 37
मुम्बई । बलिउड अभिनेता सोनु सुद लगातार मानिसहरुको सहयोगमा जुटिरहेका छन् । कोरोना समय धेरै मानिसलाई बिभिन्न मद्दत प्रकारका सहयोग गरेका सोनुले २० हजार प्रवासी मजदूरका लागि घर समेत दिने भएका छन् । सोनुले नोएडाका प्रवासी मजदूरका लागि घर दिने घोषणा गरेका हुन् । जसको जानकारी सोनुले सोसल मिडियामार्फत गराएका छन् ।
मजदूरहरुलाई ‘प्रवासी मजदूर’ एप्लीकेसनद्धारा रोजगारी दिइएको हो । रोजगारीका लागि लागि उनले एक एप्लिकेशनको सुरुवात गरेका थिए । जसबाट मजदुरको सहयोग गर्न सकिन्छ । एप्लिकेसनको नाम ‘प्रवासी रोजगार’ राखिएको थियो । यो अहिले अंग्रेजी भाषामा रहेको छ । अव छिट्टै पाँच भाषामा समेत निर्माण हुनेछ । जसलाई मजदूरले सजिलै प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यो एप्लीकेसनबाट ती मजदूरलाई मद्दत मिल्नेछ । जो आफ्नो घर छोडेर अर्काे शहरमा जाने गर्दछन् ।
Prevसरकारले मलाई पुन जिम्मेवारी दिइए पछाडि हट्दिन – कुलमान घिसिङ
Nextआज सुनमा इतिहासकै ठूलो गिरावट, धेरै सस्तो भयो सुनको मुल्य(हेर्नुहोस कति पुग्यो)
एका बिहानै माता मनोकामना माइको दर्शन गर्दै आज २०७७ साल भाद्र १७ गते बुधवारको तपाइको भाग्य कस्तो छ ? जानुहोस ,भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस
कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नेकपा संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीलाई आईसीयुमा अवस्था गम्भीर